Tag: falanqaynta dareenka | Martech Zone
Tag: falanqaynta dareenka
Axad, Maarso 7, 2021 Jimce, Maarso 12, 2021 Aleh Barysevich
Mawduucu waa boqor - suuqley kasta wuu ogyahay taas. Si kastaba ha noqotee, marar badan, suuqleyda waxyaabaha kaliya kuma tiirsanaan karaan xirfadahooda iyo kartidooda - waxay u baahan yihiin inay ku daraan xeelado kale istiraatiijiyadooda suuqgeynta waxyaabaha si ay uga dhigto mid awood badan. Dhegeysiga bulshada wuxuu hagaajiyaa istiraatiijiyaddaada wuxuuna kaa caawinayaa inaad toos ula hadasho macaamiisha afkooda. Maaddaama aad tahay suuq-geyn wax ka kooban, waxaad u badan tahay inaad ogtahay in qayb wanaagsan oo ka kooban ay ku qeexan yihiin laba astaamood: Mawduucu waa inuu la hadlaa
Appinations: Cidda, Maxaa iyo Keeba Suuqgeynta Saameynta Leh
Khamiis, Agoosto 7, 2014 Arbacada, Agoosto 6, 2014 Douglas Karr
Qaar ka mid ah aaladaha teknolojiyadda suuqgeynta waxay u egyihiin sida khamri wanaagsan maadaama ay sii wadaan kala furfuridda arrimaha dhibaatada ku haya suuqleyda. Appinions waxay umuuqataa mid kamid ah meheradahaas. Markii aan sameynay qoraal dhowr sano ka hor, waxay ahayd madal yar oo wanaagsan oo saameyn ku yeelatay mowduuc iyo qof - aad u faa'iido badan waqtigaas. Sannado ka dib oo waa madal suuq-geyn dhameystiran oo gacan ka geysan karta horumarinta istiraatiijiyado nuxur u ah shirkadaha si ay ugu hantaan maamulka
Brandwatch Kormeerka Warbaahinta Bulshada
Jimco, Diisambar 14, 2012 Jimco, Diisambar 14, 2012 Douglas Karr
Suuqgeyaashu mararka qaarkood waxay khalad ku galaan adeegsiga aaladaha sida Google Alerts si ay ula socdaan calaamaddooda. Dhibaatada ka jirta digniinta Google ayaa ah in inta badan waxyaabaha ku jira baraha bulshada aan la aqoonsan, la tixraacin loona helin sida ay wax u dhacaan. Shirkaduhu waxay u baahan yihiin inay si dhakhso leh uga jawaabaan codsiyada. Waxaa jira ixtimaal aad u sareeya oo aad seegayso wadahadalka dhacaya haddii aadan adeegsanayn aaladda kormeerka warbaahinta bulshada ee waqtiga dhabta ah. Brandwatch waxay taxaysaa dhowr sababood oo dheeri ah sababta shirkadaha